Dowladda Ingiriiska oo sheegtey in Sadex qof uga dhinteen weerarkii ka dhacay xarunta UNDP |
Dowladda Ingiriiska oo sheegtey in Sadex qof uga dhinteen weerarkii ka dhacay xarunta UNDP
Wasaarada arimaha dibada ee dalkan UK ayaa sheegtay in in Sadex qof oo British ahi ay ku dhinteen Weerarkii lagu qaadey Xarunta Hay’ada Qaramada Midoobey ee UNDP, Weerarkasoo ay sheegteen Al-shabaab, Waxaa si caadi ah loo shaaciyey iney ku dhinteen afar qof oo ajnabi ah.
Laakiin Warar dublamaasiyadeed ee Soomaaliya laga helaayo waxay sheegayaan in dhimashada Ajnabiga ay intaas ka badan tahay, Sadexda ay Wasaarada Arimaha Dibada Ingiriisku sheegeen iney British yihiin ka sokow waxaa iyana la hadal Hayaa Dhowr Qof oo isugu jiraa Koonfur Afrika iyo Kenya iney ku nafwaayeen.
BBC World Servece ayaa Wasaarada Arimaha Dibada Ingiriiska kasoo xigatey iney Sadex Qof oo Ingiriis ah ay kamid yihiin Dadka ku dhintey Weerarka.
Dhinaca kale Warar rasmi ah oo Soomaaliya ka heleen ilo lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in dhimashada Ajnabiga ee la shaaciyey ay intaas ka badan yihiin. Waxaana moodaa in sheegashadii Shabaab ay rumoowday taas oo ay sheegeen in ku dhawaan 18 qof ay ku nafwaayeen weerarkii Shaleey lagu qaaday xaruynta UNDP ee Muqdisho.